Kudzokera kuchikoro ne "Hobbit" mubhegi. | Zvazvino Zvinyorwa
Kudzokera kuchikoro ne "Hobbit" mubhegi.
alex martinez | | Fantasy
Zvakadaro kubva mukugadziriswa kweiyo bhaisikopo.
Pakati pevhiki mbiri idzi dzekupedzisira, mamirioni evana nevechidiki munyika medu vadzokera kumararamiro ehupenyu hwavo hwekuchikoro. Iwo makirasi akave zvakare akazadzwa nemweya inoda kuenderera netsika yavo, yekuumba uye pakupedzisira yakakosha kukura.
Nekuda kweruzivo rwangu sePedagogue uye mushure memakore akati wandei ndichigara nehupenyu hwekudzidzisa pamatanho akasiyana, Ini ndinogona kusimbisa kuti imwe yenyaya huru inoshungurudza vadzidzisi uye inokanganisa, nenzira isina kunaka, kusimudzira kwekudzidzisa kwevadzidzi, kushomeka kwemaitiro ekuverenga uye mhedzisiro yacho muchimiro chekushomeka, chinenge chiripo, kusvika pakunzwisisa kuverenga kuri kunetsekana.
Kuoma uku kunosanganisira, mune dzakawanda zviitiko, zvakaderera kwazvo mhedzisiro mune zvese zvidzidzo uye kunonoka munzira yekudzidza izvo zvinogona kukonzeresa mamiriro akasiyana edzidzo asingafarire vadzidzi.
Nechikonzero ichi zvinopfuura zvakafanira kusimbirira, kubva kumba uye kubva kuzvikoro, mune chaicho chakakosha chinodiwa kuti uwane tsika yekuverenga kubva paudiki kwazvo iyo inobvumira vana nevechidiki kukunda kwavo kunzwisisa uye zviperengo zvisingakwanisike.
Zviripachena, iri harisi basa riri nyore uye, zvirokwazvo, isu tichakundikana mukuyedza kuti, munyika ino izere nezvinoratidzika zvinonakidza, mudiki wemba anowana kuravira kwekuverenga. Chinhu chinosimbiswa sezvavanokura, vachiva, nekudaro, mudenderedzwa rausingakwanise kubuda kubva pariri, kana ukasanzwisisa zvauri kuverenga, hazvidzivirirwe kuti kufinhwa kuchapinda mumuviri wako uye chishuwo chekuverenga chinobva changonyangarika pakarepo.
Ndosaka zvichikosha kwazvo kusarudza bhuku kuti riverengerwe nemazvo. Semudzidzisi, ini ndichati icho chakanakira iye mwana iyeye kuti asarudze bhuku rinoenderana zvakanyanya nezvaanofarira uye zvinokurudzira. Chero zvazvingaitika, zvakajairika kuti vana havazive zvekuverenga nekuti zvese zvinoreva zvakafanana kwavari: kufinhwa uye kusungirwa.
Tichifunga nezve conjunctiva iyi, zvinokurudzirwa kwazvo kutungamira, kubva pakuona kwedu kwevakuru, sarudzo yebhuku rakakodzera mune yega nyaya. Pachiitiko ichi, ndinokurudzira "vanozivikanwa" hobbitnaJRR Tolkien. Sarudzo huru, pasina kupokana, yevadzidzi vane makore gumi nerimwe zvichikwira. Panguva ino, vazhinji venyu muchafunga kuti ndakapenga uye kuti ndakagashira zita rekudzidzisa pachiratidziro.
JRR Tolkien portrait yakagadzirwa nemunyori Donato Giancola.
Zvakanaka, kusvika parizvino ndiri mumakore gumi nematatu uye ndichaenda kunopikisa chikumbiro changu nepese pandinogona napo kuitira kuti pasave neanopokana neruzivo rwangu mumunda wekudzidzisa. Chekutanga pane zvese, ndinoda kutaura nezvekwakabva bhuku racho pacharo. Tinofanira kunzwisisa kuti munyori weSouth Africa akanyora "Iyo Hobbit, kana Ikoko uye Kudzoka Zvakare" (Chekutanga zita muChirungu) kuti unakidzwe nevana vako uye kuti vazvivaraidze nenyaya yakanyorwa nababa vavo. Naizvozvo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yakafungidzirwa munguva yayo sebhuku revana nezvose zvarinazvo.
Izvi zvinoita kuti nhoroondo yacho, inopesana nekutenda kwakakurumbira, inonakidza uye inomhanya-mhanya, pamwe nekukurumidza uye kunakidza. Naizvozvo yakachinjirwa kune vateereri vadiki. Chimwe chinhu chinoita kuti zvinyanye kunetsa kunyangwe hazvo vazhinji vachiona senge novel inokodzera chete ma "geeks" pane iyo nyaya.
Bhuku ine dura remazwi uye yakareba isingadhuri. Chinhu chekuchengeta mupfungwa kana uchikwevera kutarisisa kwevaverengi vasina ruzivo. Zvese izvi zvakasanganiswa nenyaya inonakidza uye yechokwadi, pasina mubvunzo shanduko yenguva iyoyo, zvinogona kuita kuti vana vabatike, nokudaro vachisimudzira kufunga kwavo kwekuvatakura vaende kunyikatsva nyika uye isina yakafanana navo. Pasina kutaura nezve tsika yekuvandudza ine hukama nekukosha kwebhuku mukati medzidziso yezvinyorwa.
Saka, tiri kutaura nezvazvo bhuku hombe kutanga kuverenga kana kungoenderera nekusimbisa tsika dzakanaka dzinosanganisira kuverenga. Zvese izvi, panguva yekupinda mubako reimwe remhando dzinonakidza kwazvo mumabhuku, fungidziro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » Kudzokera kuchikoro ne "Hobbit" mubhegi.
Kurudziro yakanaka kwazvo kune vedu vadiki! Chinangwa!
Kutukwa kweQuevedo's spurs.
Roald Dahl Mazwi Akabatanidzwa muOxford English Duramazwi